Taariikhda Boqorka Rerr Hollywood Will Smith Min Bilaaw ilaa Dhamaad | Filimside.net
Home » . » Taariikhda Boqorka Rerr Hollywood Will Smith Min Bilaaw ilaa Dhamaad
Taariikhda Boqorka Rerr Hollywood Will Smith Min Bilaaw ilaa Dhamaad
Taariikhda: September 12, 2017
Willard Carroll “Will” Smith, Jr. wuxuu dhashay 25 September sanadii 1968 waa atoore Ameerikaan ah, shactiroole, film qarash gareeye heesaa iyo heesaa qoraa da’diisa haatan tahay 48-sano.
Will Smith maqaamkii ugu sareeyay ayuu Hollywood-ka ka gaaray waayihiisa fanka waxayna shabakada Newsweek sanadii 2007 u dooratay inuu yahay atooraha ugu awooda badan ee Hollywood-ka “The Most Powerfull Actor in Hollywood”.
Smith wuxuu 5-jeer oo kala duwan u tartamatay abaal marinta Golden Globe Awards halka uu labo jeer u tartamat Academy Awards (Oscar) sidoo kalena 4-jeer wuxuu ku guuleestay Grammy Awards.
Dhamaadkii 80-kii Smith wuxuu ku caan baxay heesaha raabka loo yaqan sidoo kalena magaciisa wuxuu cirka sii galay markii uu xidigan dhanka TV-yada wax ka jilay weliba taxanaha caanka ah The Fresh Prince of Bel-Air ayuu ku qabsaday Hollywood-ka asigoo ka sameeyay 6-taxano oo kala duwan intii u dhaxeesay 1990 ilaa 1996.
Kadib Smith wuxuu dalacay dhanka sameynta filimada Hollywood-ka asigoo atoore buuxo noqday wuxuuna sameeyay aflaan Blockbuster ah.
Will Smith waa atooraha kaliya ee 8-filim oo xariir ah sameeyay kuwaas oo $100 million ka badan gudaha Mareekanka kasoo xareeyeen.
Sidoo kalena Smith wuxuu sameeyay 11-filim oo xariir ah kuwaas oo in ka badan $150 million suuqyada caalamka kasoo xareeyeen.
Waxaaba kasii yaab badan inuu Super Star-kan sameeyay 8-filim oo xariir ah kuwaas oo kaalinta 1-aad Boxoffice-ka USA kaga furmeen waa awood u gaar ah xidigan!!!!
Shabakada Forbes oo ku xeel dheer falanqeynta dhaaqalaha iyo awooda dadka caanka ah waxay Will Smith u aqoonsatay sanadii 2014 inuu yahay atooraha kowaad ee la isku haleen karo Hollywood-ka (The Most Bankable Actor) waa atooraha kaliya ee u damaanad qaadi karo filim sameeyayaasha inay filimkiisa macaash ka heli karaan!
Waxaa xusid mudan 17-ka mid ah 21-kiisa filim ee waa weyn Smith sameeyay waxay isku dar ahan gudaha Mareekanka iyo daafaha caalamka kasoo xareeyeen lacago $100 million ka badan.
Weliba 5-ka mid ah filimadaas suuqyada caalamka waxay kasoo xareeyen in ka badan $500 million waana iskoor kale uu u gaar ah xidigan.
Forbes waxay xaqiijisay sanadii 2014 in Will Smith wadar ahan filimadiisa ay Boxoffice-ka kasoo xareeyeen $6.6 billion!
Will Smith inkastoo uusan marnaba Oscar ku guuleesnanin hadana labo jeer ayuu Oscar u tartamay wuxuuna ku tartamay filimada kala ah Ali iyo The Pursuit of Happyness.
Dabcan Will Smith yuusan kuu gambanin ma jirto darajada dhanka Boxoffice-ka ee xidigan u dhiman waa jilaaga hor boodayo Hollywood-ka marka ay timaado sameynta iskoorada aan la oo dhawaan karin.
Will Smith Iyo Bilawgii Noloshiisii Marxaladaha Ay Soo Martay:
Will Smith wuxuu ku dhashay West Philadelphia, waxaana aabe u ah Caroline (Bright) oo ka mid ahaa maamulka iskuul ku yiilay magaalada Philadelphia sidoo kalena hooyadiisa waxaa lagu magacabaa Willard Carroll waxayna aheyd Ingineer qaboojiyaasha sameyso.
Will Smith waxaa la dhasheen gabar isaga afar sano ka weyn Pamela iyo labo mataane ah Harry iyo Allen oo isaga sedex sano ka yar.
Will Smith wuxuu wax kusoo bartay iskuu kaniisada magaalada Philadelphia ku yaalo waxayna kala tageen waalidkiisa marka uu 13-sano jiray laakiin si rasmi ah waxay isku fareen sanadii 2000.
Smith markii uu dhameestay Overbrook High School kadib wuu iska diiday inuu Jamaacad dhigto wuxuuna rabay inuu noqdo heesaa dhanka raabka caan ku ah.
Smith Iyo Shaqooyinkii Ugu Horeeyay Ee Uu Xidigan Qabtay:
Smith asigoo dhalin yar ayuu hadafkiisa ka miro dhaliyay madaama uu noqday rapper ka tirsan DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince,waxaana kooxdan kala tirsanaa saaxiibkiisii Jeffrey “DJ Jazzy Jeff” Townes oo kooxdan qarash gareeye u ahaa.
Kooxdan aqoonsan wacan ayay heleen dhankooda heesaha raabka ah sidoo kalena waxay ku guuleesteen abaal marinta Grammy Awards sanadii 1988.
Smith waxaa la sheegay inuu lacagaha si waali ah u bixin jiray si micno daraha ah balse intii u dhaxeesay 1988 ilaa 1989 waxaa lagu eedeeyay inuusan canshuurta si joogto ah u bixin jirin.
Sidaa darteed waaxda canshuuraadka xidigan waxay kusoo rogeen qaan sheegad $2.8 million kadibna dhamaan dhaqaalihii uu heestay waa laga xaalufiyay.
Smith waxaa la xaqiijiyay in sanadii 1990 uu qarka u fuulay inuu gabi ahaanba musalifo xidigan balse nasiib wanaagsan TV-ga caanka ah NBC ayaa Smith shaqo siiyay waxaana lala gaaray qandaraas ah inuu kooxda The Fresh Prince of Bel-Air dib usoo nooleeyo.
Bandhigii Show-ga aha ee Smith NBC ka bilaabay mid caan ah oo shacabka soo jiito ayuu noqday wuxuuna halkaas ka bilaabay sameynta taxano ama musal sal kala duwan.
Will samith Iyo Markii Uu Madaxa Lasoo Qaaday Sidoo Kalena Bilaabay Sameynta Filimada:
Smith labadii filim ee uu kusoo caan baxay aqoonsi wacana ku helay waxay ahaayeen Six Degrees of Separation (1993) iyo filimkii Action-ka ahaa Bad Boys (1995) oo uu la sameeyay saaxiibkiisa Martin Lawrence.
Smith sanadii 1996 ayuu Hollywood-ka qabsaday madaama filimkiisii Independence Day kaasi oo Blockbuster weyn noqday sidoo kalena filimkii labaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay ayuu sanadii 1996 ayuu noqday.
Will Smith wuxuu noqday atoore xili le ah kaasi oo sanadkii hal filim oo Blockbuster weyn noqdo wuxuuna sanadii 1998 la yimid filimkii Men In Black oo ay isla jileen Tommy Lee Jones.
Sidoo kalena isla sanadii 1998 Smith filimkiisii weynaa ee la wada amaanay Enemy of the State ayuu la yimid.
Laakiin Will Smith wuxuu sanadii 1999 iska diiday inuu hogaamiye ka noqdo filimka Classic ah The Matrix wuxuuna ka doortay sameynta filimkii ganacsi ahaan guul dareestay Wild Wild West.
Smith sanadii 2000 wuxuu la yimid filimkii sheeko ahaan iyo ganacsi ahaan la iska diiday The Legend of Bagger Vance, filimkan lagu qarash gareeyay $80M wuxuu soo xareeyay $39.46M.
Laakiin Smith aduunyada wuxuu ku qabsaday filimkiisii Ali waana filim looga hadlaayay nolosha feeryahankii caanka ahaa Muhhamad Ali.
Smith filimkan wuxuu ugu tartamay atooraha ugu wanaagsan qaybta Oscar-ka waana darajadii ugu sareesay ee uu xidigan fanka ka gaaro markii uu Oscar u tartamay.
Laakiin filimka Ali oo sheekadiisa Classic ah noqotay ganacsi ahaan gaabis ayuu sameeyay madaama lagu qarash gareeyay $107 million wuxuuna soo xareeyay $87.7 million.
Smith Iyo Markii Uu Boxoffice-ka Mareekanka Gil Gilay Iyo Waxa Uu La Yimid:
Xidigan sanadii 2002 wuxuu la yimid qaybta labaad ee filimkiisa hirgalay Men in Black II waxaana Smith la sameeyay filimkan isla Tommy Lee Jones.
Filimka Men in Black II oo lagu qarash gareeyay $140M wuxuun keenay lacago waali ah oo gaarayo $441.8M asigoo noqday taxane macaash waali ah laga helay.
Will Smith iyo saaxiibkiisa Martin Lawrence waxay la imaadeen sanadii 2003 qaybta labaad ee filimkoodii Bad Boys II wuxuuna filimkan keenay $270M ayadoo lagu qarash gareeyay $130M.
Smith sidii joogtada u ahayd sanad walbo filim lacagihiisa xad dhaaf yihiin inuu sameeyo ayuu sii watay wuxuuna 2004 la yimid I, Robot asigoo filimkan keenay $347M waxaana lagu qarash gareeyay $120M.
Super Star-kan sanadii 2005 wuxuu la yimid shactirada iyo jeceylka isku jiray ahaa Hitch sidii la wada filaaayay Smith iyo macaashka filimada kalama haraan wuxuuna filimkan keenay $368M ayadoo lagu qarash gareeyay $70M.
Smith iyo wiilkiisa Jaden Smith waxay sanadii 2006 ku midoobeen filimkii sheekada ahaa The Pursuit of Happyness.
Wax lala yaabo ma ahan in Smith filimkiisa Boxoffice-ka gil gilo sida darteed The Pursuit of Happyness wuxuu soo xareeyay $307M ayadoo lagu qarash gareeyay $55M, weliba Smith qarash gareeyayaasha uu ka mid ahaa wuxuuna helay macaash fiican.
Sanadii 2007 Smith wuxuu la yimid filimkiisii I Am Legend kaasi oo noqday filimkii 7-aad ee lacagaha ugu badan Hollywood-ka soo xareeyay.
Filimkan sida weyn looga helay I Am Legend wuxuu lacagaha guud keenay $585M waxaana lagu qarash gareeyay $150M.
Will Smith sanadii 2008 la filim ayuu la yimid midka kowaad wuxuu ahaa Hancock sheeko ahaan siweyn ayaa looga helay filimkaan midaasna waxay sababtay inuu soo xareeyo $624M ayadoo lagu qarash gareeyay $150M.
Filimkiisii labaad ee sanadii 2008 Smith la yimid wuxuu ahaa Seven Pounds filimkan lacago badan ma sameynin wuxuuna ahaa filim aan ganacsi badan laga rabin balse wuxuu keenay $168M midaas oo xaqiijisay inuu guul gaaray madaama $54M lagu qarash gareeyay.
Will Smith Iyo Markii Uu Soo Laabasho Xoog Leh Sameeyay 4-Sano Kadib:
Super Star-kan mudo 4-sano ah filim weyn oo Hollywood ah ma sameynin wuuna ka mashquulay asigoo hawlihiisa heesaha iyo Tv-yada iska watay.
Laakiin sanadii 2012 ayuu soo laba kacleeyay wuxuuna la yimid taxanihiisa qaybta sedexaad Men in Black 3 waxaana la jileen Tommy Lee Jones iyo Josh Brolin.
Inaba caadi ma ahan Men In Black 3 guusha uu gaaray wuxuuna guud ahaan soo xareeyay $624M ayadoo lagu qarash gareeyay $215M.
Smith iyo wiilkiisa Jaden waxay sanadii 2013 la imaadeen filimkii After Earth wuxuuna filimkan keenay lacag ahaan $243.8M ayadoo lagu qarash gareeyay $130M, filimkan ganacsigiisa inuu koobnaado waxaa ugu wacnaa in sheekadiisa diidmo xoogan la kulantay.
Super Star-kan sanadii 2014 wuxuu masraxa soo saartay filimka Winter’s Tale ee uu doorka caawiyaha ku lahaa filimkan jeceylka ah wuxuu keenay $31M ayadoo lagu qarash gareeyay $60M mana ahayn filim uu Smith atoore kowaad ka ahaa.
Smith sanadii 2015 wuxuu keenay filimka Focus oo ay isla jileen Margot Robbie iyo Rodrigo Santoro wuxuuna filimkan keenay $159M ayadoo lagu qarash gareeyay $50M.
Super Star-kan sidoo kale 2015 wuxuu la yimid filimkii Concussion oo ahaa filim fariin wacan xambaarsanaa sidoo kalena ahayn mid ganacsi waali ah laga rabay.
Laakiin Concussion wuxuu soo xareeyay $47.5M ayadoo lagu qarash gareeyay $35M waana filim siwey sheekadiisa looga helay.
Will Smith sanadkii 2016 waxaa usoo baxeen labada filim ee kala ah Suicide Squad iyo Collateral Beauty.Filimka Suicide Squad waxaa daafaha caalamka laga daawaday 5 bisha August 2016 sidoo kalena filimkiisa kale Collateral Beauty waxaa la dawaaday 16 December 2016.
sido kale sanadkaan 2017 bisha Dec waxaa la filaa in la daawado filimkisa xiga ee Bright.
Will Smith Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Smith wuxuu guursaday gabadha lagu magacaabo Sheree Zampino sanadii 1992 waxaana labadan lamaane u joogo hal wiil oo lagu magacaabo Trey Smith wuxuuna dhashay 11 November sanadii 1992.
Smith iyo xaaskiisii Sheree Zampino sanadii 1995 ayay si rasmi ah u kala tageen.
Smith wuxuu mar labaad guursaday atirishada lagu magacaabo Jada Koren Pinkett sanadii 1997 waxayna isku dhaleen labo caruur ah oo lagu kala magacaabo Jaden Christopher Syre Smith oo dhashay sanadii 1998 iyo Willow Camille Reign Smith oo dhalatay sanadii 2000.
Jaden iyo aabihiis Will Smith waxay isla jileen labada filim ee kala ah Pursuit of Happyness iyo After Earth.
Sidoo kalena Willow waxay aabaheed Smith kala soo muuqatay filimkii I Am Legend sidoo kalena filimka kale Harry own Treyball Development Inc wey kala soo muuqatay.
Will Smith si joogto ah wuxuu kaga soo muuqanayay wargeska Fortune Magazine ee lagu soo bandhigo 40-ka shaqsi ee ugu taajirsan gudaha Mareekanka kuwaas da’dooda 40-sano ka hooseyso ayuu mudo dheer liiskan kasoo muuqanaayay.
Will Smith Iyo Siyaasad Ahaan Halka Uu Taabacsan Yahay:
Waxaa la xaqiijiyay in Will Smith uu sanadii 2008 lacag gaareyso $4,600 ugu deeqay olo olihii uu Barack Obama doorashada madaxtinimada ugu jiray.
Smith iyo xaaskiisa bishii December sanadii 2009 waxay dhigeen xaflad lagu weyneenayay madaxweyna Obama oo markaas ku guuleestay abaal marinta Nobel Peace Priz.
Waxaa Aqrisay 1,057
2 Responses to Taariikhda Boqorka Rerr Hollywood Will Smith Min Bilaaw ilaa Dhamaad
zaki zxb warar hollywodka noo soo badiya waliba wxn idinka codsan filmka the foreigner ee soo bixi doona bisha October oo uu wado Jackie Chan in aad wararkisa noosoo gud bisaan waa film fiican halka uu marayo sida uu ku socdo
waad Ku mahadsantihiin filimside sida wacan ee noogu soo gudbisaan taariikaha kala duwan sidoo kale waxa iga codsi ah inaad inoo soo gudbisaan aktarka weyn ee dunida oo dhami kadanbeyso shahrukhan ayan ubahnaa please sxb aadan muriidi codsigayga ii aqbal